बिरामीको सेवामा कोरोना अस्पतालका नर्स, भाइटीकाका दिन पनि बिहानैदेखि ड्युटीमा खटिए ! – yuwa Awaj
काठमाडौं : स्टाफ नर्स किरण चौधरीलाई तिहारमा आफ्ना भाइलाई टीका लगाउन छुटाएको अहिलेसम्म कुनै सम्झना छैन । तर, यसवर्ष भने उनले भाइलाई टीका लगाइदिन पाइनन् । उनी बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा को’रोना सं’क्रमितको उपचारमा खटिएकी छिन् ।
बर्दियाकी किरण तिहारको दिन सोमवार बिहान ८ बजेदेखि नै ड्युटीमा खटिएकी छन् । उनी भन्छिन्,जि’म्मेवारी लिएपछि महामारीको बेला हामीले साथ छाड्न भएन । अहिलेको तिहार बिरामीको सेवा नै बित्दैछ । कुनै पनि तिहार घरपरिवारसँग मनाउन नपाए पनि दुःख मान्दिनँ । चाडपर्व मनाउने कुनै एउटा समय हुने रहेछ । जिम्मे’वारीमा पुगेपछि पाइँदैन । कुनै एक जना बिरामीको जीवन बचाउन सक्नु नै मेरो दायित्व हो ।
यही असोजदेखि कोरो’ना अस्पतालमा कार्यरत उनी को’भिड अस्पतालकी आईसीयू इञ्चार्ज समेत हुन् । २५ वर्षीया किरणले भनिन्,चाडपर्वका बेला परिवारको याद त आउँदो रहेछ । तर, महामारी सधैँ रहँदैन । अस्पतालमै लक्ष्मीपूजा गरेका हौं । बिरामीको सेवा गरेर तिहार मनाउँछौं, यसमा कुनै गुनासो र दुःखेसो छैन ।
रमा खुशीसाथ भन्छिन्,अहिले हामीले आफ्ना इच्छा, चाहना र चाडपर्व हेर्ने होइन,बि’रामीको स्वास्थ्य हेर्ने हो ।उनले थपिन्,हामीलाई त ड्युटी पर्‍यो । हामी त तिहारमा घर जाने र टीका लगाउने कुरा भएन ।
ड्यूउटी नपरेका अन्य स्वास्थ्यकर्मी घर जाँदा पनि डर छ । घरका बुढापाका बुवाआमा र बालबच्चालाई सं’क्रमण भए त्यसले ठूलो जो’खिम निम्त्याउँछ,त्यसैले अहिलेको महामारीमा स्वास्थ्यकर्मी घर नजाँदा नै घर र समाजलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ । बिरामीले निको भएर घर फर्किँदा हामी स्वास्थ्यकर्मी मनैदेखि आ’नन्दित र यु’द्ध नै जितेसरह हुन्छौं।
पूर्णिम क्षेत्री पनि बिहानैदेखि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको फिवर क्लिनिकमा सेवामा छिन् । जहाँ कोरोनाका शंकास्पद बिरामीलाई राखेर उनीहरूको स्वाब संकलन गर्नुका साथै प्राथामिक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्णिमा भन्छिन्,भाइटीका भन्दा पनि बढी जिम्मे’वारीको काममा खटिरहेका छौं । मलाई मनपर्ने चाड दिपावली हो । घरलाई झिलिमिली बनाउने मेरो ठूलो रहर थियो । तर,अहिले महामारीले गर्दा घर जान सकिएन । दुःखी छैन । बिरामीको सेवामा खटिन्छु ।
बुटवलको को’रोना विशेष अस्पतालमा १६ जना आईसीयूमा र ३ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् । महामारी शुरू भएदेखि कोभिड अस्पतालमा कार्यरत सोफिया काफ्लेले पनि तिहारमा घर गइनन् । सोमवार उने रातिको ड्युटी छ । महामारीमा हाम्रो काम सेवा गर्नु हो । निराश भए पनि उत्साहका साथ गर्ने हो,उनले भनिन् ।
उनीहरूलाई होटलमा बस्ने व्यवस्था अस्पतालले व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मीसँगै संक्र’मितहरूले पनि यस वर्ष भाइटीका लगाउन पाएनन् ।
बुटवलस्थित कोरोना विशेष आइसोलेसन सेन्टरमा अहिले १० जना संक्र’मित छन् । धेरै संक्रमितहरू घरमै रहेकाले पनि उनीहरूले टीका लगाउन पाउने छैनन् । -प्रकाश आचार्य/लोकान्तर
Prevप्रचण्डको प्रतिवेदन फिर्ता नभए सहकार्य हुन गाह्रो छ – गोकुल बास्कोटा !
Nextसरकारले राम्रो काम गरेकाले नेपालको कोरोना मृ’त्युदरमा कमी आएको हो – मुख्यमन्त्री पोखरेल !